राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सूचना लिनै सकस ! | नेपाली पब्लिक राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सूचना लिनै सकस ! | नेपाली पब्लिक
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सूचना लिनै सकस !
नेपाली पब्लिक २०७६, १ जेष्ठ बुधबार १७:५४
काठमाडाैँ – सरकारी कार्यालयमा विभिन्न प्रयोजनका लागि सूचना लिन आउनेहरु धेरै हुन्छन्। संघसंस्था, नागरिक सबैले सरकारी निकायबाट सूचना पाउनुपर्छ। तर कतिपय यस्ता कार्यालयहरु छन्, जहाँ न त सूचना अधिकारी तोकिएको छ, न त नागरिक वडापत्र नै राखिएको छ।
गएको एक हप्ताअघि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सीटी स्क्यान, एक्स–रे मेशिन लगायतको सूचना लिन नेपाली पब्लिकको टोली गएको थियो। पहिलो दिन मेसु लगायतको टोलीसँग सूचना लिन झण्डै दश ठाउँमा सोध्नुपर्‍यो।
दोस्रो दिन आवश्यक जानकारी लिन जाँदा ट्रमाका केही कर्मचारीले आफूहरुलाई सूचना दिने अधिकार नभएको र सूचना अधिकारी नभएको बताए। ‘सूचना अधिकारी को ?’ भन्ने विषयमा जानकारी लिँदा ट्रमा सेन्टरका मेसु डा. प्रमोदकुमार यादवले ट्रमा सेन्टरको सामाजिक इकाइका प्रमुख अर्जुन भेटवाललाई सूचना अधिकारी तोकिएको जनाए। तर कार्यालयमा सूचना अधिकारी रहेको जानकारी सर्वसाधारणले देख्ने गरी राखिएको छैन।
नेपाली पब्लिकको टोलीले आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै ‘सूचना चाहिएको विषय’ मेसुसँगै अन्य कर्मचारीलाई बुझायो। तर त्यसको एक हप्तापछि जाँदा पनि आवश्यक सूचना उपलब्ध भएन। कर्मचारीले मौखिक रुपमा सूचना अधिकारी तोकिएको बताए पनि औपचारिक रुपमा सूचना अधिकारी नतोकिएको बताए।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका लेखा शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद घिमिरेले आफूलाई सूचना दिने आदेश नभएकाले ‘माग गरिएको सूचना’ पत्रकारलाई नदिने बताए।
तर मेसु डा. प्रमोदकुमार यादवलाई सम्पर्क गर्दा सूचना अधिकारी तोकिसकेको र सर्वसाधारणले देख्ने गरी फोटो सहितको परिचय राख्न बाँकी रहेको जवाफ दिए। उनले नागरिक वडापत्र संशोधनको चरणमा रहेको र छिट्टै नागरिकले पढ्न पाउने गरी टाँस्ने बताए।